खल्तीले ल्यायो मोबाइल टपअपमा नेपालकै सबै भन्दा बढी क्यास ब्याक अफर, कति पाइने ? - Arthatantra.com
खल्तीले ल्यायो मोबाइल टपअपमा नेपालकै सबै भन्दा बढी क्यास ब्याक अफर, कति पाइने ?
काठमाडौं । खल्ती डिजिटल वालेटले खल्तीमा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर टपअपमा १० प्रतिशत क्यास ब्याक पाइने अफर ल्याएको छ ।
उक्त अफर टपअप सेवामा हालसम्म नेपाल कै सबै भन्दा बढी प्रदान गरिएको क्यास ब्याक रहेको छ । मोबाइल टप अप गर्न रिचार्ज कार्ड स्क्र्याच गर्न पर्ने झन्झटलाई न्युनिकरण गरि पैसा र समयको बचत गर्न उक्त अफर संचालनमा ल्याईएको खल्तीको ब्राण्ड तथा मार्केटिङ्ग प्रबन्धक शिरिष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
एनसेल, नेपाल टेलिकम, र स्मार्टको टपअपमा लागु हुने उक्त अफर अन्तर्गत क्यास ब्याक पाउन जुन नम्बरमा आफ्नो खल्ती आइडी रहेको छ सोहि नम्बर खल्तीबाट रिचार्ज गर्नपर्ने बताइएको छ । साथै खल्ती केवाईसि पनि भेरीफाई भएको प्रयोगमा रहेको खाता हुनपर्नेछ ।
उक्त योजना साउन ७ गतेदेखि सुरु भइ सिमित समयावधिको मात्र लागि हुनेछ खल्तीले जनाएको छ । क्यास ब्याक हरेक नेपाली महिना अनुसार एक महिनाको अधिकतम १ सय रुपैयाँ हुनेछ ।
त्यसपश्चात् सामान्य रूपमापाइने १ प्रतिशत क्यास ब्याक उपलब्ध हुने खल्तीले जानकारी दिएको छ । आफ्नो बाहेक अरुको नम्बर रिचार्जमा पनि सामान्य रूपमा पाइने १ प्रतिशत क्यास ब्याक उपलब्ध हुने बताइएको छ । साथै रिचार्ज गर्दा सम्पूर्ण क्यास ब्याक नदेखिए पनि शर्तहरु पुरा भएको खण्डमा भए ट्रान्जेक्शन हिस्टोरीमा पुरै क्यास ब्याक पाएको देख्न सकिनेछ ।
पाटन स्थित मकै पोल्दै गरेका खल्ती प्रयोगकर्ता ललिता यादवले भन्नुभयो–“खल्ती बाट रिचार्ज गर्न सार्है सजिलो हुने रहेछ। त्यसमाथि १० प्रतिशत क्यासब्याक पाउँदा मेरो पैसा र समय दुवैको बचत भएको छ”
१० प्रतिशत क्यास ब्याक पाउनका लागि:
१.खल्तीएपको टपअप अप्सनमा गई खल्ती आइडिमा रजिस्टर गरिएको मोबाइल नम्बर र रिचार्ज गर्न चाहेको रकम दाखिला गर्ने
२.सबै विवरण ठिक भएको निश्चित गरि “ओके” बटन मा ट्याप गर्ने, १०% अफर सम्बन्धि थप शर्तहरु खल्तीको ब्लगमा गई हेर्न सकिन्छ।
वि.सं.२०७८ साउन १० आइतवार १४:०५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे ४ देशबाट करिब ६६ करोडको विद्युतीय गाडि आयात, राज्यले कति पायो कर ?
पछिल्लाे १० प्रतिशतले बढ्यो यी आठ कम्पनीको सेयर मूल्य, प्रतिकित्ता कुनको कति पुग्यो ?